Somaliland: Gudoomiyaha UCID wuxu mutaystay Siyaasiga ugu doqonsan siyaasiyiinta Somaliland.Cali Guray - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Gudoomiyaha UCID wuxu mutaystay Siyaasiga ugu doqonsan siyaasiyiinta Somaliland.Cali Guray
Guddoomiyaha 3@ Ee Xisbiga Ucid Cali Guray Oo Haba Siyaasi Doqonimo Ku Tilmaamay Guddomiye Faysal Cali Waraabe Isaga Oo Su Dhigay Barata Oo Ku Layahay Facbook,,,Gudoomiyaha UCID wuxu mutaystay Siyaasiga ugu doqonsan siyaasiyiinta Somaliland.
Ma kala garanayo cidda uu ka dilayo iyo cidda uu u dilayo Xisbigii uu isagu gudoomiyaha ka ahaa tan iyo maalintii la asaasay welina ka yahay.
Shimbirta aynu Yaryarayda u naqaano ayaa kolka guga curashadiisu soo dhaw yahay ayaa kuweeda labka ah mid weliba bilaabaa inu dhiso buul yar ama cush uu ka soo laalaadiyo mid ka mid laamaha baarka sare cidhifyadooda ee dirta si ay uga nabadgalaan cadowgooda sida maska oo kale roobkana uga jirsadaan. Inta badan Yaryaradu waxay u nool yihiin lamaanayaal dhedig iyo lab ah balse mararka qaarkood ayaa mid isagu keligii ahi isaguna buulkiisa iska dhistaa si ay ugu soo gasho mid dhedig oo iyaduna keligeed ah oo calf doon ahi. Markuu dhameeyo ayay tii ugu horeysay u soo gashaa way soo kormeertaa bal wuxu dhisay inu raaligelinayo iyo in kale. Hadii uu u noqon waayo iyadoo konkonsan bay ka soo boodaa dabeedna way iskaga tagtaa.Tu kale ay soo booqata oo hadana buulkii gashaa haduu u noqon waayo sidii tii hore ayay ka soo booda oo maca salaama tidhaa. Kolkay laba ka soo boodo tu sedexaad intaanay ugu iman ayuu ninkii odayga ahaa dib u furfuraa buulkii uu dhismihiisa ku daalay ee inba meel ka soo qaaday oo fitir faatir u kala tuuraa.
Imika Faysal hadii uu laba goor UCID ku dhacay oo dadku qaadan waayay ma sidii shimbirka labada jeer buulkii uu dhisay lagu nacay ayuu isaguna UCID hadii uu laba goor ku dhacay inu burburiyo doonayaa?
Caqliga wanaagsani wuxu inoo sheegayaa qofka arka geedkii isagu uu beeray markii uu iniinta keliya ahaa oo intuu si fiican u baxay hadhac damal ah noqday oo la wada hadhsanayo inu yahay wax uu ku farxo oo ku faani karo. Hadiise intu gudin u soo qaato gunta ugu simo miyaanay caqli xumo sideeda u taal iyo doqoniimo keliya ahayn